Abakhiqizi nabahlinzeki be-Fiber Optical | China Fibre Optical zokufaka Factory
FTTH Fibre Optical Face Ibhokisi ZJ86
Ukubuka konke Leli bhokisi lokusatshalaliswa kwezitayela ezingama-86 lisetshenziswa kabanzi kunethiwekhi ye-FTTX ukuxhuma ikhebula lokudonsa kanye namadivayisi we-ONU ngefayibha port. Ixhasa ukusikwa, ukusatshalaliswa, ukuxhumana ngomshini kanye nokufakwa kokufakwa kodonga. Umthamo waleli bhokisi ungaba ama-2cores. Izici ● Izinto ze-ABS ezisetshenzisiwe ziqinisekisa umzimba ukuthi uqinile futhi ulula ● ​​Ukufakwa okulula: Ukukhweza odongeni ● Ukusebenza okulula: i-plug fiber ngaphandle kwesidingo sokuvula igobolondo ● Izintambo zekhebula le-Fibre ezivela kuzo zonke izinhlangothi, zisekela ukungena kwamakhebuli f ...
I-OTC-S Fibre Optical Ukubiyelwa
Ukusetshenziswa Nesici ● Kungasetshenziswa ekuqondeni nasekuqondeni kwegatsha kwezintambo ze-bunchy fiber kanye ne-ribbon fiber; ● Ifanele izinhlelo zasemoyeni noma ezibekwe odongeni; ● Phinda kube lula ukuvula; ● Isilayidi se-Slide-N-Lock fiber optic splice esine-engela yokuvula ngaphezulu kwe-90 ° C; ● Amathileyi angakhuphuka futhi ancishiswe ngokuya ngohlelo; ● Ingxenye yepulasitiki yenziwa ngopulasitiki wobunjiniyela be-PC obunamandla amakhulu, oqinisekisa ukusebenza okuhle ekulweni nokulwa namandla; ● Ukwenza kahle ...
OTC-O Fibre Optical ebiyelwe
Izindlu ze-OTC-O ziyindilinga futhi zakhiwa njengesakhiwo sokuma, esalungiswa savalwa ngehupu ekhethekile, futhi sasebenza ngokulula. Kukhona amachweba okungena / okungena. Itheku lavalwa nge-screw cap. Ngemuva kokuthi ikhebula lifakwe ethekwini, bese wehlisa isikephu sesikulufu, lapho itheku lizovalwa khona. I-OTC-O ibikulungele ukuvikela izinhlobo zamakhebuli, ubukhulu besicelo bufaka i-aerial, ngaphansi komhlaba kanye nepayipi. I-OTC-O yenziwe ngeplastiki ephezulu kakhulu yobunjiniyela, w ...
Ovundlile Fibre optic ebiyelwe (FOSC) OTC-M
1. Ububanzi besicelo Le Masudi Wokufaka Wamasango we-Fibre Optic Splice Ukuvalwa (Ngemuva kwalokhu kufushaniswe njenge-FOSC), njengesiqondiso sokufakwa okufanele. Ububanzi besicelo yilezi: ukukhweza kwasemoyeni nokwakhiwa kodonga. Izinga lokushisa elikhona lisukela ku -40 liye ku-65 ℃. 2. Ukwakheka okuyisisekelo nokumiswa 2.1 Ubukhulu namandla Ubukhulu Obuvela ngaphandle (LxWxH) 280x200x90 (mm) Isisindo (ngaphandle kwebhokisi langaphandle) 1200g-1500g Inani lamachweba wokungena / wokuthengisa max. Izingcezu ezi-4 Ububanzi bekhebula le-fiber Φ8 — -14 ...
I-OTC-J Fibre Optical Ukubiyelwa
Ukusetshenziswa Nesici ● Kungasetshenziswa ekuqondeni nasekuqondeni kwegatsha kwezintambo ze-bunchy fiber kanye ne-ribbon fiber; ● Ifanele izicelo zasemoyeni, zomsele, noma zokungcwatshwa; ● Phinda indawo evulekile yeSlide-N-Lock fiber optic splice tray ne-angle yayo yokuvula engaphezu kuka-90 ° C; ● Amathileyi angakhuphuka futhi ancishiswe ngokuya ngohlelo; ● Ingxenye yepulasitiki yenziwa ngopulasitiki wobunjiniyela be-PC obunamandla amakhulu, oqinisekisa ukusebenza okuhle ekulweni nokulwa namandla; ● Ukusebenza okuphelele ku ...
I-OTC-F Fibre Optical Ukubiyelwa
Izindlu ze-OTC-F ziyindilinga futhi zakhiwe njengesakhiwo sokumisa, esalungiswa futhi savalwa ngehupu ekhethekile, futhi sasebenza kahle. Kunamachweba ayisithupha okungena / okuphuma. Itheku lavalwa ngomkhono ovikelayo wokushisa. Ngemuva kokuthi ikhebula lifakwe ethekwini, umkhono wafudunyezwa, khona-ke itheku lizovalwa futhi intambo yalungiswa. I-OTC-F ibikulungele ukuvikela izinhlobo zamakhebuli, ubukhulu besicelo bufaka i-aerial, ngaphansi komhlaba kanye nepayipi. I-OTC-F ma ...
OTC-E Fibre Optical ebiyelwe
OTC-A Fibre Optical ebiyelwe
IP65 16ports FTTH Fibre Terminal Ibhokisi
Ibhokisi lokugcina le-IP65 16ports FTTH fiber terminal liyatholakala ukusatshalaliswa nokuxhumeka kwesiginali ngezinhlobo ezahlukahlukene zohlelo lwe-fiber fiber, ikakhulukazi efanelekile ukusatshalaliswa kwe-mini-network terminal, lapho kuxhunywa khona izintambo ezibonakalayo, ama-patch cores noma ama-pigtails. Izici: Uhlobo olungavaliwe, olulungiswe nge-bolt. Izimbobo ezimbili zekhebula zokuxhuma ikhebula langaphakathi Kulula ukusebenza, inamandla aphezulu aqukethe izinsalela zezingulube ezingakwazi ukuxhuma / ukuxhuma kabusha kuma-adaptha izikhathi ezingaphezu kwezingama-200 Isixhumi se ...